Dr. Sasa @DrSasa22222 Twitter profile | Twuko
Union Minister of International Cooperation and Spokesperson of the National Unity Government of Myanmar, and Myanmar Special Envoy to the United Nations
PEOPLE'S ASSEMBLY OF MYANMAR
Mizzima - News in Burmese - ပြည်သူ့ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား | Facebook
Advisory on Heightened Risk of Doing Business in Burma WASHINGTON — Today the U.S. Department of the Treasury joined the Departments of State, Commerce, Homeland Security, Labor, and the Office of the U.S. Trade Representative in issuingabusiness...
WASHINGTON — Today the U.S. Department of the Treasury joined the Departments of State, Commerce, Homeland Security, Labor, and the Office of the U.S. Trade Representative in issuingabusiness...
NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်(၄၀) (၃/၂၀၂၂) ကို ယနေ့ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Public Voice Television in English language
Public Voice Television - PVTV English Edition | Facebook
The State of Play in Myanmar #SpringRevolution #PVTV #PVTVEngEdition #TheStateofPlayinMyanmar
H.E. Dr Sasa talks with CRPH Support Group, Norway
CRPH Support Group, Norway - Interview with Dr Sa Sa! | Facebook
CRPH Support Group, Norway was live.
STATEMENT REGARDING THE WITHDRAWAL OF TOTAL ENERGIES AND CHEVRON 21 January 2022 Today, we welcome the decisions of Total Energies and Chevron to withdraw from supporting the military regime in Myanmar. This isabig win for the people of Myanmar....
အာဏာသိမ်းမှု တနှစ်မြောက်အထူးအစီအစဉ် (၂) 👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊 ဒေါက်တာဆာဆာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်တွေဆုံမေးမြန်းခြင်း- 👉စစ်အာဏာသိမ်းမှု အထမြောက်အောင်မြင်ရဲ့လား? 👉စစ်အာဏာလုယူမှုရဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ ဘာတွေလဲ? 👉ဒေါက်တာဆာဆာ ရဲ့အမြင် နှင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားမူများ ....
H.E. Dr. Sasa will be speaking ataspecial event coming up soon with the respected members of the Parliament of Japan
We welcome the joint statement by the KNPP, KNU, and CNF in response to the proposal of the UN Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar. We stand with them, the brave frontlines holders of our freedom&federal democracy ,support the call for urgent international actions
"သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း" "သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း" ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ပြုလုပ်သော "မတူပီမြို့နယ်တွင် အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် သတ်ဖြတ်မှု...
National Unity Government of Myanmar -...
"သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း" ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက...
Press Conference သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မတူပီမြို့နယ်အတွင်း အရပ်သားမျာအား သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုအပါအဝင် ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ကျူးလွန်နေသော နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုများ” အကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
H.E. Dr. Sasa heldaconstructive and informative meeting with the delegates and leaders of the People's Administration, People's Defence and People's Security. More than 500 delegates from all over Myanmar attended the meeting which was co-organised by MOIC&MOHAI